Sarkaalkii Shinaha udhashay ee ku geeriyooday Qaraxii Hotel Jazeera oo dalka shiina lagu aasay (Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Waxaa garoonka diyaaradaha Jinan Yaoqiang International Airport ee dalka Shiinaga laga dajiyay Meydka Sargaal Shiinees ah oo ku geeriyooday Weerarkii Ismiidaaminta ahaa ee dhawaan Xarakada Al-Shabaab ku qaadeen Hotelka Jaziira ee Magaalada Muqdisho.
Meydka Sargaalkan waxaa garoonka laga dajiyay kusoo dhaweeyya Masuuliyiin katirsan Dowlada Shiinaha , Saraakiil Ciidan iyo xubno katirsan Eheladiisa, waxaana Sargalkan ku geeriyooday Muqdisho loogu sameeyay dalkiisa Aas qaran.
Zhang Nan oo ahaa Sargaal ka howlgalayay Safaarada Shiinha ay ku leedahay Soomaaliya oo xarunteeda ku taalay dhismaha hotelka Jaziira, ayaa kamid noqday dadkii badnaa ee ku dhintay Weerarkii ismiidaaminta ahaa ee Al-Shabaab ku qaadeen isbuucii hore Dhismaha Hotelka Jaziira.
Dhimashada Sargaalkan Shiineeska ah ayaa si weyn looga dareemay dalkiisa, waxa uuna Ciidamada dalkaasi kamid ahaa mudo 11-sano ah, waxa uuna hada ilaalo ka ahaa kana howlglayay Safaarada Shiinaha ay ku leedahay Soomaaliya.
Madaxweynaha Maamulka KMG Jubba oo dalbaday in waqtiga doorashada ay dhaceyso la kordhiyo